Ukutshintsha njani ukufikelela kuTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Epreli 28, 2021 0 IiCententarios 365
Ukugcwalisa iakhawunti kubalulekile kumniniyo. Ngenxa yokukhetha, umbala, uyilo kunye nendlela umxholo weprofayile eboniswa ngayo, unokuchaphazela umtsalane wabalandeli abanokubakho.
Ngesi sizathu, i-twitter inikezela abaxhasi bayo amandla okuguqula indlela iprofayile eboniswa ngayo kubalandeli babo. Ukusuka kuseto lweakhawunti yakho, unokuguqula imvelaphi kunye nemibala ye icon, kunye nobungakanani befonti.
Ukulawula indlela ojonga ngayo umxholo kwi-twitter kunokwenzeka, ngenxa yoku kuyakufuneka ulawule ukufikeleleka kweprofayile yakho.
Amanyathelo okulawula ukufikeleleka kweakhawunti yakho
Ngena kwi-twitter usebenzisa i umsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Khangela "useto kunye nemfihlo" kwiphaneli yasekhohlo kwesikrini, kwelinye icala lesiphelo sakho. Ukuba uqhagamshela kwiakhawunti yakho ngokusebenzisa i-app ye-twitter, kuya kufuneka ucinezele ifoto yeprofayile yakho kwiscreen apho kuboniswa ixesha lakho.
Nje ukuba ungene "kuseto kunye nemfihlo", khangela Msgstr "Ufikeleleko, isikrini kunye neelwimi".
Emva kokungena kweli candelo, uya kubona kukhetho lwakho lokuqala msgstr "ukufikeleleka".
Xa ufaka "ukufikelela", uya kufumana amanye amacandelo; "Umbono" kunye "nentshukumo".
"Embonweni", uya kuba nethuba lokuphucula umahluko phakathi kwesicatshulwa kunye nemibala engasemva, ngaloo ndlela uphucula ukufundeka komxholo. Kufuneka ujonge ibhokisi.
Kwi "Motion", inani loopopayi lilinganiselwe, kunye nokubala kokudibana bukhoma. Ikhethwe ngokungagqibekanga kwaye ungayikhupha kuphela xa ucinezela ukunciphisa ukuncipha.
Kweli candelo uya kufumana "ukudlala ngokuzenzekelayo". Apha unokuthatha isigqibo sokuba ngaba ii-GIF kunye nevidiyo ziya kudlalwa ngokuzenzekelayo xa inethiwekhi ye-Wi-Fi ifunyenwe.
Kweli candelo ungalutshintsha ulwimi lomxholo owubonayo kwi-twitter nakwiakhawunti yakho:
Bonisa ulwimi: Ukukhetha ulwimi lwezinto zeakhawunti yakho, ezinentloko, amaqhosha phakathi kwabanye.
Khetha iilwimi ezininzi: ukuba ufuna umxholo ubonwe ngezinye iilwimi
Iilwimi onokuzazi: Uya kulufumana ulwimi oluye lwenziwa liqonga olaziyo ngokwento oyenzayo eqongeni.
Lawula imilo, umbala kunye nefonti.
Kwi "Bonisa" icandelo elifunyenwe kwiphaneli enye "Yokufikelela". Xa ungena apho uza kubona imenyu enamacandelo amathathu:
Isayizi yefontiUya kubona umgca oza kukuvumela ukuba utshintshe ubungakanani boonobumba.
umbala: ikuvumela ukuba utshintshe umbala weeakhawunti zakho. Kuya kufuneka ukhethe phakathi kwemibala emithandathu.
Umfanekiso ongasemva-Ungakhetha kwizinto ezintathu onokukhetha kuzo: ukungagqibeki okumhlophe, ubusuku obukhanyayo ngwevu emnyama, kunye nobusuku obumnyama (mnyama).
Qwalasela ukusetyenziswa kwedatha yakho ngokusikelwa umda "kugcino lwedata" kunye "nokudlala ngokuzenzekelayo", xa isixhobo sakho sibona inethiwekhi ye-wifi.
1 Amanyathelo okulawula ukufikeleleka kweakhawunti yakho
2 Tshintsha ulwimi
3 Lawula imilo, umbala kunye nefonti.
4 Ukusetyenziswa kwedatha